Yootak Chic, onye na-ejide ụgbọ ala maka Smartphones na Mbadamba | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Ngwaọrụ ndị ọzọ, Nyocha, Mbadamba gam akporo
Taa, m na-ewetara gị vidiyo Nyocha na nyocha nke a echiche ọhụrụ nke ihe njide ụgbọ ala magnet na n'okpuru aha nke Onyeka Onwenu Anyị ji n'aka na ị ga-ahụ ya n'anya dịka ọ ga - enyere gị aka itinye ụdị ọdụ ọ bụla, ọ bụrụ ama ma ọ bụ Mbadamba ụrọ maka iji nkasi obi na nchekwa zuru oke n'ụgbọ anyị.
Ike gwụrụ ịzụ ihe abụọ ọ bụla maka ụgbọ ala atọ na-akwụsị imebi n'ime ọnwa ole na ole na nke na-adabaghịkwa maka ụdị ngwaọrụ niile? Ọ bụrụ na azịza nye ajụjụ a bụ ee ma ị na-achọ a Nkwado itinye ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba n'ime ụgbọ gị, ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọala, mgbe ahụ, ị ​​nọ ebe kwesịrị ekwesị ebe ọ bụ na anyị ga-ewetara gị echiche ọhụrụ a nke nkwado ndọta maka ụgbọ ala na anyị ga-enwekwa ike inweta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnụahịa dịka nkwado nkwado, na nke ahụ ụgwọ nke Yootak Chic a bụ naanị euro 22.
1 Gịnị bụ Yootak Chic?
2 Osisi Yootak Chic
Gịnị bụ Yootak Chic?
Yootak Chic bụ echiche ọhụrụ nke ugwu ụgbọ ala magnet nke anyị ga-enwe ike idobe ụdị ngwaọrụ ọ bụla n'agbanyeghị nha ya. Ya mere, anyị ga-enwe ike idowe ọbụna nnukwu mbadamba na dashboard nke ụgbọ anyị na-enweghị ịzụta nkwado pụrụ iche maka ụdị ọnụ a.
Onyeka Onwenu O mejuputara ihe ato ndi iche di iche, na nkpuru ndi ozo chrome * Tụkwasị bọl Ha bụ ndị mara ezigbo mma na minimalist imewe, a Neodymium chromed magnetik diski na attaches na gburugburu ọzọ a mkpa efere metal a na-etinye ya n'azụ ngwaọrụ ahụ ka a ga-etinye ya na nkwado ahụ.
A na-ahụ maka chrome diski magnet ike neodymium, nke na-ahụ maka idozi efere igwe dị nro nke anyị debere na azụ nke ngwaọrụ a ga-eji na ụgbọ ala. Na mgbakwunye, chrome * Tụkwasị bọl atụmatụ dị ike 3M VHB nrapado, nke gbakwunyere iji dozie bọl ahụ na dashboard nke ụgbọ ala ahụ, nwekwara teknụzụ nke na-enye ya ohere iwepụ ya n'ụgbọ ahụ na-ahapụghị akara ọ bụla naanị site na iji eriri ịkwa akwa dị ka ngwá ọrụ iji wepụ nrapado ahụ.
na Yootak Chic mkpọNa mgbakwunye na bọọlụ chrome, bọọlụ magnetic Neodymium na efere ọla maka azụ nke ngwaọrụ a ga-eji a na-etinyekwa efere ọla kọpa iji tinye na njedebe nke abụọ, ma ọ bụ ekwentị ọzọ ma ọ bụ mbadamba, na mgbakwunye na gụnyere nrapado nke 3M na ihe eji eme mmanya iji hichaa elu nke anyị ga-etinye bọọlụ chrome n'ụgbọ ala anyị yana azụ akụrụngwa anyị ga-edozi efere igwe dị larịị.
Ọ bụrụ na mgbakwunye anyị chọrọ ọtụtụ bọọdụ iji nwee ike iji ha na ngwaọrụ ndị ọzọ , site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Yootak Chic anyị nwere ike ịnweta efere ndị ọzọ na ọnụahịa nke euro 5 ọ bụla na ọtụtụ atụmatụ dị iche iche na iche iche dị iche iche nke oke osimiri.
Na vidiyo a na-etinye na m hapụrụ gị n'aka nri nke isi okwu a, m na-egosi gị n'ụzọ miri emi echiche nke magnetik nkwado ọhụrụ maka ụgbọ ala ndị n'okpuru aha Yootak Chic bịarutere ịgbanwe ahịa ahịa ma ọ bụ mbadamba nkume. Anyị na-egosikwa gị ngwaahịa ahụ n'ụzọ zuru ezu, anyị na-egosi gị otu esi etinye efere nrapado na mkpanaka anyị na mbadamba nkume yana otu esi etinye akụkụ chrome n'ime ụgbọ ahụ yana otu o si arụ ọrụ nke ọma mgbe ị na-etinye mobile na mbadamba, na ikpe a na Samsung Galaxy S6 Edge Plus na iPad mini.
Ọ bụrụ na ị chọrọ zụta ihe a Yootak Chic magnetik njide Naanị ị ga-pịa njikọ a nke ga-akpọrọ gị gaa na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke Yootak Chic iji nweta ya na-enweghị onye ọ bụla na-anọchite anya naanị 22 euro.
Osisi Yootak Chic
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Yootak Chic, nkwado magnetik maka mkpanaka gị ma ọ bụ mbadamba ị ga-ahụ n'anya
David na-agagharị dijo
Enwere m ya ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ na-aga nke ọma
Zaghachi David Navarrete
Castlọ Dan dijo
Ajụjụ m na-ajụ onwe m bụ ...
Ekwentị ọ na-eme ọtụtụ abụba maka ndị anyị na-ebu ya na ikpe?
Ọzọkwa, ọ ga-emetụta NFC? Na S7 m ka m ji ya ntakịrị ọ ga - abụ ihe mgbu ma ọ bụrụ na ọ naghị arụ ọrụ.
Zaghachi Dan Castle
Ọ naghị emetụta n'ụzọ ọ bụla, ọ bụghị maka GP ma ọ bụ NFC ma ọ bụ ọbụlagodi maka ikpe ahụ ebe ọ bụ na, dịka ị hụrụ na vidiyo ị nwere ike ịga n'ihu iji ikpe gị na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Igwe Ọdụdọ na-enyeghị nsogbu na mobile yana kwa ihe nchọgharị ị na-eji
Zaghachi Luis Ruiz
Mba, ọ naghị emetụta ma ihe nchọgharị karịrị Google sitere na gam akporo Auto App.
I na-ekwu na ọ naghị emetụta NFC mana… ugbua Ọ B W Ọ B W EBERE AKW ?KWỌ?
Echeghị m na ọ na-emetụta nkwụnye ụgwọ ikuku ma ọlị, ọ bụ ezie na enweghị m ike igosipụta n'onwe m.
Kedu ọnụ ahịa gara aga !! Ọ gafeela afọ 1 kemgbe mụ na ndị ọrụ ibe m bidoro ịzụ ha na Aliexpress maka ihe dịka € 1.
Ma, er otu ihe ha na-ekwu na ndọta na ndị ọzọ neodymium na niile electronic ngwaọrụ adịghị mma nke ukwuu?
Maka mbufe na Colombia ego ole ka ọ na-efu otu puku ekele
HBO Spain nwere ngwa maka gam akporo nwere ọnwa nnwale n'efu
[APK] Clip Layer bụ ngwa ọhụrụ Microsoft iji detuo ederede na clipboard